Aqoonso wejiyada kala duwan ee fikradda soo jiidashada dhuleed,
Aqoonso caqabadaha haysta,
Ogow agabka iyo kabaallayaasha waxqabadka.
Koorasku wuxuu ujeedkiisu yahay inuu soo bandhigo wejiyada kala duwan ee fikradda soo jiidashada dhulalka, arrimaha ay soo bandhigto iyo sidoo kale qalabyada iyo kabayaasha ficillada la taaban karo ee ka jawaabi kara iyaga. Soo jiidashada iyo suuqgeynta dhulku waa mawduucyo istiraatijiyadeed oo loogu talagalay jilayaasha dhulalka kuwaas oo aan rabno in aan taageerno xirfadooda.
MOOC-dan waxay beegsanaysaa xirfadlayaasha horumarinta dhaqaalaha ee ku jira qaabab kala duwan: horumarinta dhaqaalaha, dalxiiska, wakaaladaha hal-abuurka, wakaaladaha qorsheynta magaalooyinka, kooxaha tartanka iyo jardiinooyinka tignoolajiyada, CCI, adeegyada dhaqaalaha, soo jiidashada iyo bulshooyinka caalamiga ah, la-taliyayaasha iyo wakaaladaha isgaarsiinta ee ku takhasusay suuqgeynta dhulka/soo jiidashada, mustaqbalka xirfadlayaasha horumarinta dhaqaalaha: EM Normandie, Grenoble Alpes University, IAE de Pau, IAE de Poitiers, Sciences-Po, dugsiyada qorsheynta magaalooyinka iyo machadyada, iwm.
Soo jiidashada iyo Suuqgeynta Dhulka Janaayo 17th, 2022Tranquillus
READ Chemistry: u fur albaabada tacliinta sare!
horeFasax la siiyo waalidiinta carruurta leh ee ku dhaca cudurrada daba-dheeraada ama kansarrada qaarkood
socdaANSSI waxaa ka go'an in ay horumariso madaxbanaanida dhijitaalka ah ee EU inta lagu jiro PFUE